चिसोबाट जोगिऔं – Rajdhani Daily
मुलुकका विभिन्न भागमा बढ्दै गएको चिसोले आइतबारसम्ममा २५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । चिसोकै कारण कतिपय स्थानमा आवतजावतमा समस्या देखिएको छ भने सर्वसाधारण घरमै कठ्यांग्रिएर बस्न विवश छन् । पूर्वी र पश्चिमी तराई क्षेत्रमा वृद्ध र बालबालिका चिसोबाट बढी प्रभावित भएका छन् भने पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूकम्पपीडितको अवस्था उस्तै दर्दनाक छ । हरेक वर्ष जाडो याममा यसैगरी चिसो बढ्छ, केहीको मृत्यु र केही बिरामी हुन्छन् तर सिंहदरबारभित्र बस्नेहरूले विज्ञप्ति निकालेर समय बिताउँछन् । विगतमा जस्तै यसपालि पनि सरकारले गर्ने त्यही हो । जनताका नाममा सजग हुन आग्रह गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली विज्ञप्ति केही दिनमा आउला ।
पुस–माघमा जाडो र गर्मी याममा गर्मीको प्रकोप नेपालको तराई क्षेत्रका स्थायी समस्या हुन् । हरेक वर्ष मौसमी प्रभावले केही व्यक्ति बिरामी र मृत्यु भए पनि सरकारले यसको स्थायी समाधान खोज्नेतर्फ अहिलेसम्म पहल गरेको छैन । यदि राज्यले नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउन बेलैमा पहल गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन । चिसो बढिसक्यो राज्यले केही गर्छ कि भनेर मुख हेर्न थालियो भने जे पनि हुन सक्छ । तसर्थ, जहाँजहाँ चिसोको संक्रमण बढेको छ । चिसो नियन्त्रणका उपाय तत्कालै अवलम्बन गर्नुपर्छ । अति विपन्न परिवारका लागि न्यानो कपडा पहिलो आवश्यकता हो । त्यसका लागि स्थानीय निकाय र विभिन्न सामाजिक संस्थाले पहल गर्ने हो भने तत्कालै केही हदसम्म समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । विपन्न परिवारका सदस्यलाई न्यानो कपडास्वरूप ब्ल्यांकेट, सिरक र डसनाको मात्रै व्यवस्था गर्ने हो भने पनि केही हदसम्म चिसोको कहरबाट बचाउन सकिन्छ । कतिपय स्थानमा दिउँसो पनि उत्तिकै समस्या छ । ती स्थानमा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने दाउरा, गुइँठा वा बाल्न मिल्ने अन्य सामग्री जम्मा गरेर आगो तापेर पनि चिसोको कहरबाट केही हदसम्म मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
तराईदेखि पहाडसम्मै चिसोको प्रकोप बढिसक्यो । तसर्थ, तत्काल स्थायी समाधानका उपाय खोज्न सम्भव छैन । अस्थायी विकल्प खोजेर तत्कालको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई चिसोबाट मुक्त गर्न पहल गर्ने पहिलो दायित्व भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिकै हो । अन्य विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छौं भनेर कार्यक्षेत्र बनाएर बसेका संघसंस्थाका पदाधिकारीसँग समन्वय गरेर न्यानो कपडा मात्रै वितरण गर्न सकियो भने पनि केही हदसम्म चिसोबाट जोगाउन सकिन्छ । व्यक्ति आफैं पनि सजग हुन जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा पाएसम्म झोलिलो खानेकुरा खानुपर्छ । जस्तो भए पनि जीउ ढाक्ने गरी बाक्ला लुगा लगाउनुपर्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा चिसो बढेको बेला अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कँदा राम्रो हुन्छ । झुपडीमै किन नहोस्, घरभित्रै बस्दा चिसोको कहरबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
त्रिविको प्रश्नः हड्तालमा उत्रने चिकित्सकहरु तलव खान नैतिकताले दिन्छ?
‘मेरो सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास गराऊ’
अन्ततः डा. केसी काठमाडौं आए
July 2018 (1216)